I-Knowledge Futures Group ne-AfricArXiv yethula i-Audio / Visual Preprint Repository ku-PubPub - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu Ulwazi Futures Group & AfricArXiv on I-23rd April 2020 I-23rd April 2020
I-PubPub, iplatifomu yokubambisana yomthombo ovulekile eyakhiwe yi-Knowledge futures Group, ihlanganyele nayo I-AfricArXiv, indawo yokugcina yase-Afrika, ukusingathwa kokulalelwayo okulalelwayo / okubukwayo. Lokhu kusebenzisana kuzokwenza ukuthi ukuthunyelwa kwemultimedia kuzungeze imiphumela yocwaningo, kubandakanya ukubamba iqhaza komphakathi kanye nempendulo evela nakubacwaningi.
Ngemininingwane engaphezulu sicela uvakashele africarxiv.pubpub.org
Isiphakamiso se-DOI: 10.21428/3b2160cd.dd0b543c
Njengenkundla yokubamba ama-preprints, imibhalo yesandla eyamukelwe, nokuphrinta okuthunyelwe, kufaka phakathi ikhono lokuxhumanisa nedatha nekhodi, i-AfricArXiv ngaleyo ndlela iqhubekisela phambili umthelela nokutholakala komhlaba wonke kweminikelo yabaphenyi base-Afrika kusisekelo solwazi lomhlaba jikelele.
“Ukwethulwa kwezimpawu zomsindo / ezibukwayo kuthatha ukuxhumana kwabafundi ezingeni elilandelayo - kunikeza ososayensi inkundla yezokuxhumana enhlobonhlobo ukuveza ubungoti babo hhayi embhalweni kuphela kepha bahlanganyele ngempela nabanye abacwaningi. Lesi sinyathelo sisiza futhi abacwaningi base-Afrika ukuthi bahlanganise umsebenzi wabo ngaphandle kombhalo nemizwa engaphatheki ekhombisa ukuphuthuma nokubaluleka komthelela kuyo yonke i-Afrika nasemhlabeni jikelele. ”
Joy Owango, Umqondisi eTCC Africa
Sijabule kakhulu ukuthi singakuhlola lokhu ngokubambisana neLwazi Futures Group kanye ne-PubPub yabo esebenza ngokubambisana. Lokhu kubambisana kuzonika amandla abacwaningi base-Afrika ukuthi bakwazi ukubona ngokushesha ukuxhumana kwabo ngocwaningo lwabo yize i-COVID-19 icishiwe. Imiphumela evela kulolu hlelo izosisiza ukuthi siqonde futhi impendulo engcono kakhulu ye-COVID-19 kanye necebo lokungenelela labacwaningi e-Afrika yonke.
U-Obasegun Ayodele, CTO eVilsquare
I-PubPub kanye ne-AfricArXiv babelana ngentshisekelo ye-Open Science, evumela ukwabiwa kocwaningo oluphakathi kwemikhakha eyahlukene, kanye nezinto ezintsha eziholwa ngumphakathi. "I-AfricArXiv inikeza indawo ebaluleke kakhulu kanye nendawo yokusebenzisana ezinikele yabaphenyi base-Afrika abafuna ukuxhumana ngomsebenzi wabo ngokushesha nangempumelelo," kuphawula uHeather Ruland Staines, iNhloko Yezokusebenzisana kwe-Knowledge Futures Group. “I-PubPub ijabule ukusingatha amafomethi amasha wokuprinta ukusiza ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wezifundiswa zase-Afrika ufakiwe ekubambisaneni okubalulekile okwenzekayo ukuthola ikhambi lokunciphisa imiphumela ye-COVID-19, kungakhathalekile ukuthi lunikezwa ngaluphi ulimi. Silangazelela ukuhlola lezi zinqubo ezintsha zokuxhumana kwezazi sisonke. ”
I-PubPub, iphrojekthi yefulegi le-Knowledge futures Group, eyethulwe ngonyaka we-2017. Isikhulumi somthombo ovulekile sisekela amaphephabhuku amanengi abukezwa ngabontanga nezincwadi ezivela kubashicileli baseyunivesithi nabomphakathi, nezincwadi ezicishe zibe yinkulungwane ezidalwe futhi zigcinwe izifundiswa ngazinye iminyango. I-PubPub yazisa inqubo yokwakhiwa kolwazi ngokuhlanganisa ingxoxo, isichasiselo, futhi ihumushelwe ekushicilelweni okufushane nokwedijithali okwedijithali.
Mayelana neQulu lekusasa leLwazi
Iqembu Lokwazi Ngekusasa, eyasungulwa e-MIT, ngumphakathi wezobuchwepheshe, abakhi bemininingwane, kanye nabashicileli bezazi abazinikele ekubhekaneni nesethi eyisisekelo yezingqinamba nezinkinga eziyinkimbinkimbi ezikhungweni ezifuna ucwaningo. Inhloso ye-KFG ukuthuthukisa amathuluzi avulekile, ingqalasizinda, namamodeli webhizinisi asobala azogquma indalo yokwakhiwa kolwazi kanye nokusetshenziswa ekulinganeni nasekuzimeleni.
Ungakusho kanjani lokhu: U-Ayodele, O., Havemann, J., Owango, J., Ksibi, N., no-Ahearn, C. (2020). Isiphakamiso. I-AfricArXiv. https://doi.org/10.21428/3b2160cd.dd0b543c
Categories:	UkubambisanaCovid-19Vula UkufinyelelaIsanduleloPublishingEzokuxhumana Kwesayensi
Tags: Iqembu Lolwazi lekusasaI-PubPub